NGWA SSD MAKA KỌMPUTA: NKE KACHASỊ MMA, N'ELU 2018 - DISK - 2019
Ọ bụ ọtụtụ ihe kpatara ọsọsọ nke kọmputa nkeonwe. Oge nzaghachi na ọsọ nke usoro a bụ ọrụ nke nhazi na RAM, mana ọsọ nke ịkwaga, ịgụ na ịde data dabere na ọrụ nke nchekwa faịlụ. Ogologo ogologo oge na ahịa jupụtara na HDD-ebu, ma ugbu a, ha na-anọchi SSD. Ihe ọhụụ bụ kọmpat na nnukwu ọsọ data. Top 10 ga-ekpebi nke SSD ụgbọala dị mma maka kọmputa na 2018.
Kingston HyperX siri ike
Ogologo oge ọrụ nke ndị mmepe na-enweghị ọdịda bụ ihe dị ka nde awa 1
Ụgbọ njem si American Company Kingston nwere ọnụ ala na arụmọrụ dị mma. Ikekwe nke a bụ ngwọta ego kachasị mma maka kọmputa nke ị na-eme atụmatụ iji SSD na HDD. Ọnụahịa nke ụgbọala 240 GB adịghị gafere 4,000 rubles, ọsọ ahụ ga - ejikwa onye ọrụ ahụ anya nke ukwuu: 550 MB / s na ederede na 490 MB / s maka ịgụ - nsonaazụ siri ike maka ụdị ọnụahịa a.
SSD na ebe nchekwa nchekwa TLC dị ka ibe 3D Micron kwere nkwa ije ogologo oge karịa ndị asọmpi
Onye nnọchiteanya ọzọ nke usoro mmefu ego, dị njikere idozi na kọmputa nke kọmputa gị maka puku rubles 3.5,000 ma nye onyinye 240 GB. The Smartbuy Splash 2 mbanye na-eme ngwa mgbe ọ na-edegara 420 MB / s, na-agụkwa ozi na 530 MB / s. Ngwaọrụ a ma ama maka obere mkpọtụ na nnukwu elu na okpomọkụ nke 34-36 ° C, nke dị mma. A na-achịkọta diski ahụ dị elu ma na-enweghị ihe ọ bụla. Nnukwu ngwaahịa maka ego gị.
Ụgbọaka ahụ nwere njikọ SATA mara mma na njikọ dị jụụ n'okpuru ibu.
Ngwaọrụ site na GIGABYTE enweghị ọnụahịa dị elu ma na-atụ anya na ọ ga-emepụta ihe dị iche iche maka ihe ngosi nke ọsọ na arụmọrụ. Kedu ihe mere SSD ji bụrụ ezigbo nhọrọ? N'ihi nkwụsi ike na nguzozi! 256 GB maka 3,5 puku rubles na ọsọ ọsọ na ịgụ karịrị 500 MB / s.
Ogo kachasị elu, ngwaọrụ ahụ nwere ike ikpo ọkụ ruo 70 Celsius, nke dị oke ọnụ
SSD si na Taiwanese ụlọ ọrụ Transcend na-etinye onwe ya ka ọ bụrụ ọnụọgụ ego maka mpaghara ahịa nke etiti. Ngwaọrụ ahụ na-efu ihe ruru puku ise rubles maka ebe nchekwa 256 GB. N'ịgụ ọsọ ọsọ, ụgbọala ahụ na-emeri ọtụtụ ndị asọmpi, na-arị elu ruo 560 MB / s, Otú ọ dị, ndekọ ahụ na-ahapụ ihe dị ukwuu: ọ gaghị eme ngwa ngwa karịa 320 MB / s.
Maka ịdị mma, arụmọrụ nke SATAIII 6Gbit / s interface, nkwado maka NCQ na TRIM, ị nwere ike ịgbaghara diski maka ụfọdụ ezughị okè.
The drive nwere 4-isi na-arụ ọrụ Phison PS3110-S10
Ọ dịtụbeghị mgbe 240 GB hụrụ ya nke ọma. Kingston HyperX Savage bụ SSD dị mma, ọnụahịa ya anaghị eru pasent 10 rubles. Ịgba ọsọ a na ngwa diski dị arọ ma na-ede ma na-ede ihe data karịrị 500 MB / s. N'ebe dị anya, ngwaọrụ ahụ dị ịtụnanya: aluminum a pụrụ ịdabere na ya dị ka ihe gbasara ikpe ahụ, ihe mgbakwunye siri ike na-acha odo odo na agba ọbara na logo HyperX a na-achọpụta.
Dịka onyinye, ndị na-azụ SSD na-enye Acronis True Image Data Transfer Programme - dịka onyinye dị nta maka ịhọrọ Kingston HyperX Savage.
Nchekwa nchekwa bụ 512 MB
Ekwela ka nke kachasị ọhụrụ, ma SSD 2016 nwapụtara na Samsung abụghị ihe efu kachasị mma n'etiti ngwaọrụ ndị ahụ na ụdị TMB 3D NAND. Maka nsụgharị nke 265 nke ebe nchekwa, onye ọrụ ga-akwụ ụgwọ ruru puku 9.5. A na-akwụ ụgwọ a site na nri siri ike: Samsung MEX 3-isi na-ahụ maka ọsọ - ọsọ ọsọ a na-agụ na-aba 550 MB / s, ihe ndekọ ndị a dịkwa 520 MB / s, na okpomọkụ dị n'okpuru ibu aghọọ ihe ngosi nke àgwà ụlọ. Ndị mmepe na-ekwe nkwa ọrụ elekere 2 nde.
The Intel 600p ụgbọala bụ nhọrọ dị ukwuu maka SSDs dị elu maka ọnụahịa nke ngwaọrụ dị n'etiti
Na-emeghe akụkụ nke SSSS ngwaọrụ dị arọ 600p. Ị nwere ike ịzụta 256 GB nke ebe nchekwa anụ ahụ maka puku rubles iri na ise. Nnukwu ụgbọala dị ike ma dị elu na-eme nkwa afọ ise nke ọrụ a ga-ejide n'aka, n'oge nke ọ ga-eju onye ọrụ ahụ anya nke ukwuu. Onye na-eji usoro mmefu ego agaghị enwe anya na 540 MB / s dee ọsọ ọsọ, Otú ọ dị, ruo 1570 MB / s agụ bụ ihe siri ike. Intel 600p na-arụ ọrụ na TLC 3D NAND flash memory. O nwekwara njikọ njikọ NVMe kama SATA, nke na-enweta ọtụtụ narị megabits nke ọsọ.
Ọ bụ Marvell 88SS9293 na-achịkwa ụgbọala ahụ ma nwee 1 GB nke RAM
Ihe karịrị 240 GB nke ebe nchekwa Kingston HyperX Predator ka dinara 12,000 rubles. Ọnụahịa ahụ dị oke mkpa, Otú ọ dị, ngwaọrụ a ga-enye ọhụụ ọ bụla SATA na ọtụtụ NVMe. Predator na-arụ ọrụ na mbipụta nke abụọ nke PCI Express interface na-eji akara ama anọ. Nke a na-enye ngwaọrụ na ọnụego data ohere. Ndị na-emepụta ihe ahụ kwuru ihe dịka 910 MB / s na 1100 MB / s maka ịgụ. N'okpuru nnukwu ọrụ, ọ naghị ekpo ọkụ ma ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ dịghịkwa edozi isi nhazi ahụ, nke mere ka SSD dị iche na ngwaọrụ ndị ọzọ nke klas a.
Otu n'ime SSDs ole na ole na-abịa na enweghị ụdị 256 GB nke onboard memory
Mpempe akwụkwọ kachasị nta nke ebe nchekwa ahụ bụ 512 GB dịka puku rubles iri na ise. Njikọ Njikọ PCI-E 3.0 × 4 na-eme ka ọgba ọsọ ahụ gaa elu ọnụ. O siri ike iche n'echiche na nnukwu faịlụ dị 2GB nwere ike ịdebanye aha maka nke a na nkeji abụọ. Ọ ga-agụkwa ngwaọrụ 1.5 ugboro ngwa ngwa. Ndị mmepe si na Samsung na-eme nkwa ndeji awa abụọ nke ọrụ a na-eji arụ ọrụ nke ụgbọala ahụ na-ekpo ọkụ ruo 70 Celsius.
Intel Optane 900P bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ọkachamara.
Otu n'ime SSDs kachasị ọnụ ahịa n'ahịa, nke chọrọ 30,000 rubles maka 280 GB, bụ ngwaọrụ Intel Optane 900P. Ọkaibe dị mma maka ndị afọ ojuju na kọmputa na-anwale ụdị ọrụ dị mgbagwoju anya na faịlụ, eserese, nhazi ihe oyiyi, nhazi vidio. The diski bụ ugboro 3 karịa ọnụ karịa NVMe na SATA, ma ka kwesịrị ka anya maka arụmọrụ ya ma karịa 2 GB / s na ọsọ mgbe ị na-agụ na ide.
SSD-draịvụ egosiri na ị ga-abụ nchekwa nchekwa na nchekwa maka kọmputa nkeonwe. Kwa afọ, ụdị ndị ọzọ dị elu na-apụta n'ahịa, ọ gaghị ekwe omume ikwu oge ịgba ọsọ maka ịde ihe na ịgụ ihe. Naanị ihe nwere ike ịchụso onye nwere ike ịzụta ego ịnweta SSD bụ ego nke ụgbọala ahụ, Otú ọ dị, ọbụna na mpaghara mmefu ego nwere oke nhọrọ maka ụlọ obibi PC, ma ụdị ndị kachasị elu dị maka ndị ọkachamara.